Abavelisi beRF | China Umzi mveliso weRF kunye nabaxhasi
Ithegi kunye nelebheli
Isango le-UHF RFID laBantu Ac ...
Inkqubo ye-EAS ye-RF ye-EAS 8.2mhz i-RF ...
Ivenkile yokuThengisa i-EAS 58khz AM C ...
Inkqubo ye-Antenna AM ye-Acryl ...
INKQUBO EA AM Inkqubo yeAcryli ...
EA Anti-Ubusela 4040mm RF Soft Label Supermarket-4040 Label
Ezi thegi zizixhobo nje ezincinci ze-elektroniki ezibandakanya i-chip kunye ne-eriyali, zihlala zenzelwe ukuthintela Ukuba ezivenkileni. Ngee-tag ze-RF, isandi esikhulu siza kukhala xa umntu ezama ukushiya ivenkile ngaphandle kokuhlawulela loo mntu. Iimpawu zeRF zine ezinye izicelo ezininzi naye.
Igama lebrand: ETAGTRON
Inombolo yomzekelo: I-RF 4040 Label (No. 4040 / RF)
Uhlobo: Ileyibhile yeRF
Ubukhulu: 40 * 40MM (1.57 ”* 1.57”)
Uyilo lwangaphambili: ze / zeMhlophe / zeBhakhowudi / ezenziwe ngentando
Rhoqo: 8.2MHz ± 5%, 9.5MHz ± 5%, 10.5MHz ± 5%
Isincamathelisi esishushu: Henkel
I-RF 8.2Mhz ye-EAS Mini Tag Square eMnyama ngePini yoKhuseleko lweeRetail ze-Mini-Square
Inkqubo ehambelana nayo yonke injongo yeRF ehambelanayo, ithegi yokhuseleko ye-Elektroniki yeNqaku (i-EAS), i-8.2MHz Rectangular Mini yeyona nto iphambili kubathengisi abaninzi ukunqanda ubusela ezivenkileni. Into yayo encinci yefomathi kunye noyilo olulula lwenza ukuba unamathele kwizinto ezigudileyo kwaye zilula ngelixa ukhusela izinto ngaphandle kokuphazamisa amava e-shopper, ukuthengisa okanye ukunyusa uphawu.
Inombolo yomzekelo: I-Mini Square Tag (No. 001 / RF)
Uhlobo: I-RF Tag
Ubukhulu: 48 * 42MM (1.81 ”* 1.65”)
Umbala: Ngwevu / Mhlophe / Mnyama
I-RF ye-8.2Mhz ye-EAS yeDome Dome Tag enePini yoKhuseleko lweRetail Tag-Middle Dome
Le thegi yenzelwe iinkqubo ze-8.2MHz RF. Amanyathelo ethegi yi-2.13 ″ (54mm) ubukhulu kwaye iza kuMnyama. I-Middle Dome Tag idibanisa ukubonwa okukhulu kunye noyilo olubonakalayo. Ijongeka intle kwaye yanamhlanje ngeli xesha kwangaxeshanye yenye yezona zinto zinzima kakhulu kubantu abaza kuba ngamasela ukuzama ukoyisa. Uyilo lohlobo lwe-clamshell lithetha ukuba akukho kuvulwa ukuzama ukusika i-tag okanye ukuyivula. Sincoma le tag.
Inombolo yomzekelo: I-Middle Dome Tag (i-016 / RF)
Lobukhulu: φ54MM (-2.13 ”)
I-RF 8.2Mhz i-EAS R50 Tag enePin yokuThengisa abaThengisi beReta-R50
Ukusebenza okukhulu, ixabiso kunye nokusebenza kakuhle - ithegi ye-R50 yeyona tag yokhuseleko ithandwayo esetyenziswa kwisitrato esikhulu. Ithegi enkulu enzima, esetyenziselwa ukukhusela iimpahla, kunye neenkqubo zokukhusela ivenkile yeRF 8.2MHz.Le tag inikezela ngobuninzi bokubona (1.8m) phakathi kwee-eriyali zenkqubo ye-EAS.
Inombolo yomzekelo: R50 Tag (No. 019 / RF)
Lobukhulu: φ50MM (-1.97 ”)
I-RF ye-8.2Mhz i-EAS X50 Tag enePin yokuThengisa abaThengisi be-Tag-X50
Iimpawu ezijikelezileyo okanye iithegi zeRF zisetyenziselwa ukukhusela iimpahla. Bafunyenwe bebulela kwii-eriyali zeRF ezifakwe ekuphumeni. Ifumaneka ngeendlela ezahlukeneyo kunye nobukhulu obahlukeneyo. Zenziwe ngepini yobude obahlukeneyo kwaye zitshixiwe ekuphumeni nge-textile detacher yendawo yonke.
Inombolo yomzekelo: X50 Tag (No.022 / RF)
EA-Anti-Theft 4040mm RF Label Supermarket-R42 Label
Ilebheli yeRF 50x50mm ihambisa intsebenzo ethembekileyo kunye nokukhuselwa kwempahla kusetyenziswa itekhnoloji yeRadio Frequency (RF). Ikopi eprintiweyo ebusweni belebheli yenzelwe ukuba ibonise amasela anokubakho ukuba izinto zikhuselwe ileyibhile yokhuseleko kwaye ukuphatha izinto ezikhuselweyo kwindawo efumanekayo kuya kuyikhubekisa inkqubo yentsika.
Inombolo yomzekelo: I-RF 5050 Label (No. 5050 / RF)
Ubukhulu: 50 * 50MM (1.97 ”* 1.97”)
I-RF ye-8.2Mhz ye-EAS Mini Dome Tag enePin yoThengiso lweeTeksi-zeDome
I-Mini Dome Tag iyahambelana nenkqubo yokulwa ubusela ye-8.2 MHz EAS RF. Le yithegi encanyathiselwe kwimveliso ekufuneka ikhuselwe, kusetyenziswa isikhonkwane okanye isikhonkwane. Ipini ibanjwa yithegi, kusetyenziswa intwasahlobo enemagnethi.
Inombolo yemodeli: Mini Dome Tag (No. 015 / RF)
Lobukhulu: φ45MM (-1.77 ”)
EA-Anti-Ubusela 4040mm RF Soft Label Supermarket-5050 Label
Umgaqo wokusebenza welebheli ethambileyo ngulo: fakela isixhobo sokujonga ubuchwephesha ekuphumeni kwevenkile, uncamathelise ileyibhile okanye uncamathisele ileyibheli enzima yokulwa ubusela kwimveliso, kwaye ubeke ileyibheli ethambileyo kwimveliso okanye usebenzise isitshixo ukuvula imveliso dlulisa umtshina emnyango kakuhle. Ukuba uthatha izinto ngeelebhile ezithambileyo okanye ezelebhile ngaphandle kokuhlawula, xa udlula kumtshini, umtshintshi uya kulumkisa, ngaloo ndlela ekhusela umdla woqoqosho wentengiso.
EA Anti-Ubusela 4040mm RF Soft Label Supermarket-3030 Label
Ileyibhile ethambileyo incamathele kwimveliso ukukhusela imveliso. -Imveliso enelebheli ethambileyo inokudlula emnyango emva kokufumana intlawulo kwaye idlule kwidikhowuda. Ukuba ucango aluchazwanga, kuya kukhutshwa umqondiso wealam. Ifanelekile ukulwa ubusela bezinto zorhwebo, anti-ubusela kwiivenkile ezinkulu, iivenkile zesebe, iivenkile ezibonwayo kunye nezinye iindawo.
Inombolo yomzekelo: I-RF 3030 Label (No. 3030 / RF)
Ubukhulu: 30 * 30MM (1.18 ”* 1.18”)
I-RF 8.2MHz ye-EAS enkulu yeTag yesikwere kunye nePin Supermarket yoKhuseleko kwi-Tag-Large Square
Tag EA isetyenziswa ngokubanzi evenkileni ukukhusela impahla, iminqwazi, iingxowa njalo njalo. Ingasetyenziswa kunye nezixhobo ze-EAS, ezinje ngezikhonkwane, imisila yenkomo.
Inombolo yomzekelo: Ithegi enkulu yesikwere (No. 004 / RF)
Ubukhulu: 68 * 55MM (2.68 "* 2.17")
Lwedilesi:RM101, Yuzhou park park, No.3409 Jinghong Road, District Minhang, Shanghai (201108)
Umnxeba:0086 21 64953088-826
© Copyright - 2010-2021 Etagtron, Inc.: Onke amalungelo agciniwe.